နောက်ကျမှ ရောက်လာသော ဝီလျံနှင့် နည်းပြ ဆာရီ စကားပြောဆိုမည်၊ အဆုံးသတ်ပိုင်းတွင် ပိုကောင်းရ?? - Yangon Media Group
နောက်ကျမှ ရောက်လာသော ဝီလျံနှင့် နည်းပြ ဆာရီ စကားပြောဆိုမည်၊ အဆုံးသတ်ပိုင်းတွင် ပိုကောင်းရ??
ချဲလ်ဆီးနည်းပြသစ်ဆာရီက ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် အသင်းသို့နောက်ကျ မှလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည့် ကွင်းလယ်လူ ဝီလျံနှင့်ပတ်သက်၍ မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေပြီး ကစားသမားနှင့် စကားပြောဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝီလျံသည် ဘရာဇီးအသင်းနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကစားခဲ့ပြီးနောက် သတ် မှတ်ထားသောအချိန်တွင် အသင်းသို့သတင်း ပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး အချိန်နောက်ကျမှ ရောက်လာခဲ့သည့်အတွက် စိတ်ပျက်မိ ကြောင်း ဆာရီကဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆာရီက ”ခင်ဗျားတို့မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော်မဖြေခင်မှာ ဝီလျံနဲ့ကျွန်တော် စကားပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဒီအခြေအနေ အတွက် ကျွန်တော်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတာ မှန်ပေမယ့် အဖြေတစ်ခုခုမပေးခင်မှာ သူနဲ့ စကားပြောဆိုချင်ပါသေးတယ်”ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဆာရီက ဝီလျံအ ပြင် ဟာဇက်၊ ကော်တွိုက်စ်တို့နှင့် ပတ်သက် ၍ ခန့်မှန်းသတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော် လည်း မိမိအနေဖြင့် ယင်းကစားသမားများ နှင့် စနေနေ့ကမှတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကို မျှပြောဆို နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ မည်သည့်အသင်း မဆို ကစားသမားကောင်းများကို ဆက် ထိန်းလိုသည်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ချဲလ်ဆီးနောက်ခံ လူ ရူဒီဂါက အာဆင်နယ်နှင့်ပွဲတွင် အသင်း ၏ကစားပုံမှာ လျော့ရိလျော့ရဲနိုင်ခဲ့ပြီး ယခု သီတင်းပတ်အကုန်တွင် ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲ စဉ်ကစားရတော့မည်ဖြစ်ရာ အဆုံးသတ် ဂိုးသွင်းယူမှုအပိုင်းတွင်လည်း တိုးတက်မှုရှိရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ချဲလ်ဆီးသည် ICC ဖလားပွဲအဖြစ် အာဆင်နယ်နှင့်ကစားခဲ့ရာတွင် ပုံမှန်ပွဲချိန် အတွင်း တစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့ပြီးနောက် ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ခံယူရာတွင် အရေး နိမ့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး အဆုံးသတ်ညံ့ဖျင်းခြင်း များအတွက် ရူဒီဂါက စိတ်ပျက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ရူဒီဂါက ”ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကစားပုံကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး ဦးဆောင်ဂိုး လည်း သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ကတည်းက နောက်ထပ်ဂိုးတွေရခဲ့သင့်ပေ မယ့် ပွဲပြီးခါနီးမိနစ်တွေမှာ ကစားပုံ ကလျော့ရိလျော့ရဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းခြေစွမ်းကိုကြည့် ရင်လည်း နောက်ဆုံးဘော လုံးပေးပို့မှုအပိုင်းတွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ပါ တယ်။ နှစ်သင်းစလုံး အခွင့်အရေးရှိခဲ့တာမှန် ပေမယ့် ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရခဲ့သင့် ပြီး နောက် ကျချေပ ဂိုးပေး ရတာ မဖြစ် သင့်ပါ ဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
ထိုင်ဝမ်သို့ စစ်လက်နက် ဒေါ်လာသန်း ၃၃ဝ ဖိုး ရောင်းရန် အမေရိကန် အတည်ပြု
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဂျစ်က ရင်းဂစ် ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအား ဆော်ဒီဘုရင်ထံမှ ရရှိခဲ့သည့်ဆိုသည့် ဘဏ??
ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရ ပြောင်းသွားမည် စိုးသဖြင့် ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်၊ ရိုးရိ?
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင?